May 22, 2012 - Written by Afgooye:-Saraakiisha horkacaya ciidanka DFKM ayaa markii ugu horeysay ka warbixiyey dagaal culus oo ka dhacay duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan qeybo ka mid ah Degmada Dayniile waxayna guulo ka sheegteen dagaalka iyaga oo ku faanay in ay goobo hor leh ka qabsadeen Ururka Al-Shabaab.
Abaanduulaha ciidamada milateriga ee DFKM , Jen. C/kariin Yuusuf Aadan (Dhego-badan) iyo taliyaha gaaska koowaad ee ciidamada DFKM Jen. Cabdullaahi Cali Caanood ayaa shirjaraa,id ku qabtay Degmada Dayniile waxay sheegeen in ay ciidamadooda guulo ka gaareen dagaalka saaka Degmada Dayniile.
Taliyaha gaaska koowaad ee ciidamada DFKM Jen. Cabdullaahi Cali Caanood ayaa sheegay in ay qabsadeen Garoonka Diyaaradaha ee Degmada Dayniile wuxuuna sheegay in ay ka gudbeen deegaanada Garasbaaley iyo KM-13 ,ma jiraan cid ka madax banaan oo xaqiijinaysa guulaha ay sheegteen AMISOM iyo kuwa DFKM .
Dhanka kale afhayeenka howlgalada ee Ururka al-Shabaab C/casiis Abu Muscab ayaa sheegay in markii 3aad ay ku jabiyeen ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM Degmada Dayniile wuxuuna sheegay in dagaalka maanta ay ka qeyb qaateen saraakiil cadaan ah .
Afhayeenka Al-Shabaab ayaa beeniyey guulaha ay sheegteen ciidamada AMISOM iyo kuwa DFKM wuxuuna beeniyey in deegaano looga qabsaday dagaalkii saaka wuxuuna ugu baaqay dhamaan shacabka Soomaaliyeed in ay garab istaagaan Al-Shabaab.
Afhayeenka ciidanka AMISOM Pandy Nkunda oo saxaafada la hadlay ayaa sheegay in ciidamada Burundi oo ka tirsan kuwa AMISOM ay weerarka qaadeen iyaga oo taageeraya kuwa DFKM sida loo sugo ayuu yiri wadada isku xirta Afgooye iyo Muqdisho isaga oo ku faanay in ay howlgaladaas guul ka gaareen.
Dagaalka maanta ayaa waxaa ku dhaawacmay 12 qof oo uu ku jiro sawir gaade ka tirsan Tv Royal24 waxaana ku dhintay 4 kale ilaa haatan si rasmi ah looma oga khasaaraha gaaray ciidamada AMISOM iyo kuwa Al-Shabaab.